Oke mmiri ozuzo: kedu ihe ha bụ, otu ha si eme na njirimara | Netwọk Mgbasa Ozi
Ezigbo mmiri ozuzo
Dika anyi mara, enwere otutu mmiri ozuzo dika o siri malite na agwa ya. Taa, anyị ga-ekwu maka ya iru mmiri ozuzo. A na-ejikwa aha mmiri ozuzo mara ha. Ha bụ mmiri ozuzo nke na-emepụta site na mbelata nke nrụgide nke ikuku na mpaghara. A na-eke ha dị ka a ga-asị na ọ bụ ígwé ojii n'ụzọ kwụ ọtọ na mmiri ozuzo ndị ọ na-ahapụ na-abụkarị ndị bara ụba.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmiri ozuzo na-amalite.
1 Ọdịda na nguzobe
2 Ezigbo mmiri ozuzo
3 Isi mmalite mmiri ozuzo
Ọdịda na nguzobe
Ihe mbụ dị mkpa ịmara bụ otu o si eme na ọdịda. Mgbe ikuku dị n'elu na-ekpo ọkụ, ọ na-agbago na elu. Ebe troposphere okpomọkụ ya na-adalata na elu, ya bụ, ka anyị na-arị elu, ọ na-ajụ oyi karịa, yabụ mgbe ikuku ikuku na-arị elu, ọ na-abanye n'ikuku oyi ma na-eju afọ. Mgbe juputara ya, ọ na-abanye na obere ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ kristal ice (dabere na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku gbara ya gburugburu) ma gbaa obere irighiri ihe nwere dayameta na-erughị micron abụọ hygroscopic condensation nuclei.
Ezigbo mmiri ozuzo na-eme ya site na ịrị elu nke ikuku na-ekpo ọkụ na ikuku dị jụụ. Iswa na-ekpokwu ọkụ na mpaghara ụfọdụ karịa ndị ọzọ. Ihe niile dabere na elu ụwa na nsogbu nke radieshon nke anyanwụ. Otu ihe a na - eme n'ụdị ahịhịa mejupụtara ebe nke ọ bụla. Njirimara ndị a na-eme ka a na-enyefe okpomọkụ na ikuku nke bụ akụkụ kachasị elu na n'ụdị afụ. Ka elu na-arị elu, ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe ma na-agbachitere ya ruo mgbe ọ ghọrọ afụ ikuku oyi. N'ihe banyere ikuku nke ikuku na-ebu ikuku, a na-emepụta igwe ojii na nke ahụ bụ mgbe usoro odide ahụ mere wee daa ọdịda ahụ.
Ihe okike nke mmiri ozuzo A pụkwara imepụta ya site n'ụdị igirigi. Nke a na - enye ohere ịrị elu nke ikuku ikuku nke metụtara usoro ntụgharị na njirimara nke ma mpaghara mmiri na-ekpo ọkụ ma na mmiri. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ihe a na-emekarị n'oge oge ọkọchị na mpaghara ndị nwere ihu igwe kachasị mma. Ha na-apụtakarị na oké ifufe ma na-abịa na àmụmà na égbè eluigwe.
Ọ na-eme na ókèala nwere njirimara dị larịị ma ọ bụ nke nwere obere ezughị oke na ọdịdị ala. Ebe ndị a nwere ọnụnọ nke iru mmiri na ikuku na-ekpo ọkụ nke na-ewepụta usoro igwe ojii nke ụdị Cumulonimbus.
Isi mmalite mmiri ozuzo
Mmiri ozuzo a na-amalite mgbe ikuku ikuku nke dị na okpomọkụ dị elu na-ezute mmiri na-asọpụta mmiri dịka osimiri. Ọ na-eme nzukọ a, nke ọnọdụ okpomọkụ ya dị iche, na-etolite igwe ojii nke na-edozi ngwa ngwa mmiri ma na-ewepụta oke mmiri ozuzo.
Mgbe radieshon nke anyanwụ rutere n’elu ụwa nke ukwuu, ụwa na-ekpo ọkụ. Mgbe alụlụ mmiri na-eto, ọ na-ejupụta ma na-abanye na mpaghara kachasị elu nke ikuku. Ka ikuku na-arị elu, ọ na-erute okpomọkụ dị ala ma na-eme ka ọ kpuchie ebe ọ bụ na ha zutere ebe igirigi. Nke a pụtara na ọnọdụ okpomọkụ nke alụlụ mmiri na-eme ka ọnọdụ ikuku odide.
Maka mmiri ozuzo na-ezo ọ dị mkpa na ígwé ojii ebidola mgbe usoro ikuku mmiri na-ejupụta. Nke a na - eme ka oke ikuku buru nnukwu mmiri mmiri.
Ka anyị lee ihe bụ isi njiri mara mmiri ozuzo:
Mmiri ozuzo sitere na okwukwo nke na ebili site na ikuku ikuku. Ikuku a na-ebili ma na-ebugharị ekele maka sel ndị na-ebugharị ngwa ngwa.
Ikuku na-ebili na-atụghị anya ya n'ihi ntakịrị nkwekọrịta nke ikuku nwere gburugburu ya, na -emepụta akpa ikuku dị ka balloon.
Ka ikuku jụrụ oyi ọ na-eru oke okpomọkụ n'akụkụ ebe igirigi.
Mgbe odida nke ikuku malitere, igwe ojii na-amalite ịmalite ma na-eme ka mmiri zoo na mpaghara ebe ọ kpụrụ.
Ezigbo mmiri ozuzo Ha na-ahụkarị mpaghara mpaghara ebe okpomọkụ ma ikuku na-ekpo ọkụ. Ọ na-esokarị àmụmà na àmụmà ma na-akpata oké ifufe eletrik.
Mmiri bụ mmiri ozuzo nke na-emekwa ka akụ́ mmiri ígwé.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmiri ozuzo na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ezigbo mmiri ozuzo
Zọ njem nke Venus
Oke Osimiri Java